Baidoa Media Center » Guddoonka Qaybdiid iyo Guusha Galmudug.
Guddoonka Qaybdiid iyo Guusha Galmudug.
August 2, 2012 - Written by admin - Edited byadmin Maamulka Galmudug ee xaruntiisu tahay Gaalkacyo, waxaa dhidibada loo taagay 14/8/2006-dii. Madaxweynihii ugu horreeyey waxaa ka noqday Maxamed Cali warsame “Kiimiko” mudane “Kiimiko” xilka wuxuu yahay muddo 3 sano ah, intuu xilka hayay wuxuu wax ka qabaty arrimo badan, oo ay ka mid yihiin: Nabadgalyada, Waxbarshada, Caafimaadka iyo Dhib u dhiska deegaannada uu ka taliyo maamulkaa.
Maamulkii mudane Caalin wuxuu la falgalay wadanka oo ay ka dhacayaan isbadallo waaweyn oo dhan walba leh, amni [Burcadbadeed iyo Alshabaab], dhaqaale, dawladeyn iyo soo afjaridda kala guurka ah, wuxuu gacan weyn ka gaystay qorshaha nabadda ee loo yaqaanRoadmap-ka, sidoo kale wuxuu aad ugu dhabar adaygay dhammaystirka Dastuurka qabyo qoraalka ah, oo aan maamulka la’aantood marna dhammaystirmeen.
Doorashada mudane Cabdi Xasan Cawaale “Qaybdiid” waxaa ka hadlay mudane C/raxmaan Faroole madaxa maamulka Bari, wuxuu yiri: “Waxaan rajeyneynaa maamulka Galmudug inaan is kaalmeysano oo aan gacan isa siino si aan ceebta Soomaaliya uga tirno meeshaas ka shisheysa ilaa Hoboyo, Xarardheere iyo Ceelbuur oo Al- Shabaabku iyo Burcadbadeedu fadhiyaan” waxaa la yiri: “Maroodigu Takarta isaga saaran ma arkee tan kale yuu arkaa!” waxa weeye mudane Faroole ma arki waayey Burcadbadeedda deegaanka Eyl fadhida? Ma arki waayey Argagixisada Buuraha u jira ee Sheekha Atam hoggaansho? Maxaa tusay deegannada maamulka Galmudug, muu ku ekaado deegaannada uu ka taliyo?!
Waa inuu nabad iyo is fahan iyo wada noolaansho ka dhex abuurto deegaamada ku hareeraysan waxaay hirgelisay nidaamkii loo abuuray, Gobollada bartamaha waxaa dega Soomaali oo dhan, waana inay helan maamul midaysan u horseedo gobollada dhexe in ay hal cod, hal cudud iyo hal caqli ugu shaqeeyaan nabadda iyo huromarka.